EBUGAZINA ỌGBAKỌ ALA BEKEE;ỌHANEZE GWARA NDI ỌCHỊCHỊ – hoo!haa!!
ENUGWU: Ọhaneze Ndigbo adọọla ndi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ha mụta ịnọ n’ala anyị bụ Naịjiriya were chọọ ọsịsa maka nsogbu ala a karịa ịga mba ofesi ịga hazi atụmatụ maka nsogbu dị na Naịjiriya.
Nkea dị n’ozi ọnụ na-ekwuru otu a wepụtara ndi nta akụkọ ụnyahụ.
Ozi a kọwakwara na Imeobi Ọhaneze ga-enwe ọgbakọ n’oge na-adịghị anya ijiri kpebie ebe Ndigbo kwụ maka nhọpụta onyeisiala nke afọ ọzọ.
O kwukwara na ọ bụ oge e mechara ọgbakọ imeobi ahụ ka Ọhaneze ga-agwa Ndigbo ebe a na-eje. N’ihi nkea, ọ dọrọ madụ nile aka na ntị ka ha ghara izipu ozi ọbụla banyere ndọrọ ndọrọ 2019 n’aha otu a na-enwetaghị ikike n’aka ụlọọrụ izugbe otu a.
Ozi ahụ kọwakwara na udiri nnyocha ndi ọrụ nchekwa nyochara ụgbọelu bu Alahaji Atiku Abụbaka n’ọdụ ụgbọelu ka ọ gachara njem mba ofesi nwere ka ọ dị mana ọ sịkwa na o nweghị onye kwesịrị ịbụ “aka akpa n’isi” ebe emebere iwu maka madụ nile.
Ozi bịakwara na-arụtụ aka na mgbarụ ihu ọtụtụ ụmụamala Naịjiriya gbarụrụ maka ọgbakọ atụmatụ nke onye ji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị PDP azọ ọkwa onyeisiala duru madụ iri anọ ga mee na mba Dubaị.
Nwamadị a bụ ọnụ na-ekwuru Ọhaneze kọwara na-enwere ọtụtụ ọmalịncha ebe e nwere ike ịnọ mee udiri ọgbakọ ahụ na Naịjiriya dịka Ogige Nike Lake, Enugwu, Ogige Obudu Cattle Ranch, Ogige Yankarị Game Reserve , wdg.
Ụfọdụ ndi hoo!haa!! gbara ajụjụ ọnụ kọwara na o nweghị ihe o mere,na Atiku zuru ka emee, na ego o mefuru bụ ego ya, na o nweghị onye ọ gbasara. Ndi ọzọ sịrị udiri ịla ego n’iyi a abụghi ihe a tụrụ anya n’aka onye chọrọ ịchị Naịjiriya n’oge a ụbịam ji Naịjiriya aka
Previous Post: NGWA EGWU (Musical Instruments)
Next Post: DIAMOND BANK:MADỤ ANA AKWỌ ONYE KA YA?